Nagu saabsan - Protech International Group Co., Ltd.
In La Kordhiyo Wadajirka Shirkada lana Dhiso Dhaqanka Shirkadeed ee Shirkadda. Soo Koobid Mahadcelin, Bogaadin Sannad-dhamaad ah, Iyo Qiyaas Mustaqbalka!
Shirkadda Protech International Group Co., Ltd. waxay qaadataa alaabada qalabka casriga ah sida udub dhexaadka, oo ay kujiraan kormeerayaasha jawiga banaanka iyo dibada, aaladaha casriga ah iyo mitirrada, iyo aaladaha isku xirka daruuriga, kuwaas oo siday u kala horreeyaan loo isticmaalo baaritaanka elektarooniga ah iyo korantada, kormeerka bey'adda gudaha iyo dibedda, kormeerka calaamadaha caafimaadka iyo qaybaha kale. Waa wadarta bixiyaha xalka. Badeecooyinka waxaa loo dhoofiyaa in ka badan 100 dal iyo gobol sida Yurub, Ameerika iyo Koonfur Bari Aasiya. Wada-hawlgalayaasha caalamiga ah ee ugu waaweyni waa Leroy Merlin, Foucault iyo noocyo kale oo caalami ah, Shiinahana wuxuu la shaqeeyaa Xiaomi, Huawei iyo barnaamijyo kale.
Shirkadda 'Protech International Group Co., Ltd' waxay leedahay xafiis iyo warshad isku dhafan, oo baaxadeedu dhan tahay 1,500 oo mitir murabac. Waxay ku taal Degmada Nanshan, Shenzhen, Gobolka Guangdong, aagga xudunta u ah Shenzhen. Waxay ku xiri kartaa macaamiisha gudaha iyo shisheeyaha masaafo gaaban. Macaamiisha waxay ku qaadataa oo keliya 40 daqiiqo inay ka gaaraan cinwaanka shirkadda garoonka diyaaradaha.
Waaxda wax soo saarka
Protech International Group Co., Ltd waxay u qaadataa alaabada qalabka casriga ah sida xudunta, oo ay kujiraan kormeerayaasha jawiga gudaha iyo banaanka caqliga leh, aaladaha casriga ah iyo mitirrada, iyo aaladaha isku xirka daruuraha, kuwaas oo siday u kala horreeyaan loo adeegsado baaritaanka elektarooniga iyo korontada, kormeerka bey'adda gudaha iyo dibedda, kormeerka calaamadaha caafimaadka iyo meelaha kale. Waa wadarta bixiyaha xalka. Badeecooyinka waxaa loo dhoofiyaa in ka badan 100 dal iyo gobol sida Yurub, Ameerika iyo Koonfur Bari Aasiya. Wada-hawlgalayaasha caalamiga ah ee ugu waaweyni waa Leroy Merlin, Foucault iyo noocyo kale oo caalami ah, Shiinahana wuxuu la shaqeeyaa Xiaomi, Huawei iyo barnaamijyo kale.